नेपालका टप १० धनि व्याक्ति कसको सम्पति कति छ त जानकारी लिनुहोस .. - Sudur Khabar
नेपालका टप १० धनि व्याक्ति कसको सम्पति कति छ त जानकारी लिनुहोस ..
Total Reader : 10
विश्वप्रसिद्ध म्यागेजिन फोब्र्सले हरेक वर्ष विश्वभरका धनाढ्यहरूको सम्पत्ति विवरणसहितको सूची सार्वजनिक गर्छ, जसका आधारमा संसारकै सर्वाधिक धनी को हो ? कसको सम्पत्ति कति छ र ? कसले कसलाई उछिन्यो जस्ता रोचक तथ्य बर्सेनि सतहमा आउँछन । उक्त सूचीमा अहिलेसम्म एक जना नेपाली धनाढ्य विनोद चौधरी मात्र अटाएका छन । अस्ट्रेलियाको बीआरडब्लू रिचले त्यहाँका धनाढ्यहरूको सूची प्रकाशित गर्छ, जसमा नेपालीमूलका व्यवसायी शेष घले सूचिकृत छन ।
नेपालका १० धनीको सुचीमा को को पर्छन ? कसरी धनी भए ? पढ्नुहोस्
विनोद चौधरी सीजी कम्पनीका मालीक हुन् । उनको सबै भन्दा बढी कारोबार हुने भनेको वाई वाई चाउचाउ बताइन्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा वाई वाई को कम्पनि खोली कारोवार गर्ने गर्छन् । उनका ८० भन्दा बढि कम्पनि नेपाल भन्दा बाहिर रहेको बताईन्छ । उनी नेपाल राजनितीमा पनि संग्लन्न छन् । केही समय अगाडि सम्म नेकापा (एमाले)मा रहेका उनी अहिले कांग्रेसमा गएका छन् ।
शेष घले एनआरएनका पुर्व अध्यक्ष हुन । उनी अष्ट्रिेलीयन नगरीक भएक छन् । उनी मेलबा्रेन कम्पनीका अध्यक्ष पनि हुन् । उनी संग २६५ मिलियन डलर भन्दा बढि भऐका बताईन्छ ।
उनी रुस बाट पिएचडी पास गरेर ब्यापार थालेका मानीस हुन् । उनी टेलीभिजन कम्पनीका मालिक हुन् । उनले रुसमा टेलिभिजन कम्पनी खोलेका छन् । उनी बैंकिङ क्षेत्रका साथै हेवी मेसीनरी समानको ब्यपार पनी गर्छन् ।
अजय सुमर्गी मकवानपुर जिल्लामा जन्मीएका हुन् । उनी मुक्तिश्री कम्पनीका मालीक हुन् । उनलाई नेपालको ठुला राजनीतक व्यक्ती संग बढि हिमचम भएको मानीन्छ । उनी नेपालका अर्बपति मध्ये एक हुन् ।
जनकपुरमा जन्मीएका उनी अहिले क्यनेडियन नागरीकता लिएका छन् । उनी व्यपारी का सथै सामाजिक काममा पनि सक्रिय मानीन्छन् । उनी संग एक मिलियन डलर भन्दा बढी रहेको छ ।
टिभी उत्पादन कम्पनीका मालिक हुन् । उनी ईन्जीनियरिङ पढ्न रुस गएर सामसुङ,एलजी कम्मनीमा काम गरी पछि उपेन्द्र महतो संग मिलेर इल्सन ब्रन्डका टेलिभिजन उन्पादनमा लागे ।
पशुपति शंमसेर राणा
पशुपति शंमसेर राणा नेपालका राजनीतज्ञ हुन् । अहिले राप्रपा प्रजातान्त्रीक पार्टीको अध्यक्ष हुन । उनी भारतको ठुलो घरानमा बिहे गरी दाईजो ल्याएका थिए भनिन्छ । उनलाई २५हजार मिलियन बराबरको दाईजो प्रदान गरिएको बताईन्छ ।
उनी हङकमा आफ्नो ब्यबसाय सम्हालेर बसेका छन् । त्यसको अलाबा रियल स्टेट र इलोक्टोनिस्मा पनि उनको संलन्नता रहेको छ । ओखलढुङ्गामा जन्मीएका उनी उनका ब्रिटिस आर्मी बाबु र परिवार संगै हङ्कङ भासिएका थिए ।
सय बर्ष भन्दा बढी नेपालमा ब्यपार गरेर बसेको उनको परिवारको इतिहास छ । उनी खेतान परिवारका जेठा सन्तान हुन् । खेतान ग्रुपका १३ भन्दा बढि कम्पनी छन् नेपालमा । उनी नेपालका सफल र युवा व्यवसायी मान्नीन्छन् । उनी लक्ष्मी बैंक र प्राईम लाईफ इन्सुसेन्सका अध्यक्ष हुन् ।
नेपालका पुर्व राजा हुन् ज्ञानेन्द्र शाहा । उनी र उनको परिवारले १७ भन्दा बढी कम्पनीमा सेयर रहेको छ । उनी नेपालका धनी मध्ये एक हुन्
आजदेखी बढेको प्रेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फिर्ता लिन आग्रह
तपाई को या आफन्तको मोबाईल थोत्रो भएर फाल्ने सोचमा हो भने नफाल्नुहोस यस्ता छन त्यो भित्र बहुमुल्य चिजबस्तु …